ဦးမြင်လွင် (လူဝတ်နှင့် 227 သွယ် - အမေ့သားလေး.... @ mixxt
ဦးမြင်လွင် (လူဝတ်နှင့် 227 သွယ်
ငါ့သျှင်တို့ ရဟန်းသည် ကိုယ်တိုင်ပင် မိမိကိုယ်ကို ''ငါသည် အလိုဆိုး ရှိလေသလော၊ အလိုဆိုးတို့၏ အလိုသို့ လိုက်လေ သလော'' ဟု ဆင်ခြင်ရမည်။ ငါ့သျှင်တို့ အကယ်၍ ရဟန်းသည် ဆင်ခြင်သော် ''ငါသည် အလိုဆိုး ရှိ၏၊ အလိုဆိုးတို့၏ အလိုသို့ လိုက်၏'' ဟု သိအံ့၊ ငါ့သျှင်တို့ ထိုရဟန်းသည် ထိုယုတ်ညံ့သော အကုသိုလ် တရားတို့ကိုပင် ပယ်ရန် အားထုတ် ရမည်။ ငါ့သျှင်တို့ အကယ်၍ ရဟန်းသည် ဆင်ခြင်သော် ''ငါသည် အလိုဆိုး မရှိ အလိုဆိုးတို့၏ အလိုသို့ မလိုက်'' ဟု သိအံ့၊ ငါ့သျှင်တို့ ထိုရဟန်းသည် ကုသိုလ် တရားတို့၌ နေ့ရော ညဉ့်ပါ ကျင့်လျက် ထိုနှစ်သက် ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြင့် သာလျှင် နေရမည်။
ငါ့သျှင်တို့ တစ်ဖန် ထို့ပြင်လည်း ရဟန်းသည် ကိုယ်တိုင်ပင် မိမိကိုယ်ကို ''ငါသည် မိမိကိုယ်ကို မြှင့်တင် တတ်လေ သလော၊ သူတစ်ပါးကို ရှုတ်ချ တတ်လေ သလော'' ဟု ဆင်ခြင်ရမည်။ ငါ့သျှင်တို့ အကယ်၍ ရဟန်းသည် ဆင်ခြင်သော် ''ငါသည် မိမိကိုယ်ကို မြှင့်တင် တတ်၏၊ သူတစ်ပါးကို ရှုတ်ချ တတ်၏'' ဟု သိအံ့၊ ငါ့သျှင်တို့ ထိုရဟန်းသည် ထိုယုတ်ညံ့သော အကုသိုလ် တရားတို့ကိုပင် ပယ်ရန် အားထုတ်ရမည်။ ငါ့သျှင်တို့ အကယ်၍ ရဟန်းသည် ဆင်ခြင်သော် ''ငါသည် မိမိကိုယ်ကို မမြှင့်တင်တတ် သူတစ်ပါးကို မရှုတ်ချတတ်'' ဟု သိအံ့၊ ငါ့သျှင်တို့ ထိုရဟန်းသည် ကုသိုလ် တရားတို့၌ နေ့ရော ညဉ့်ပါ ကျင့်လျက် ထိုနှစ်သက် ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြင့် သာလျှင် နေရမည်။
ငါ့သျှင်တို့ တစ်ဖန် ထို့ပြင်လည်း ရဟန်းသည် ကိုယ်တိုင်ပင် မိမိကိုယ်ကို ''ငါသည် အမျက် ထွက်တတ်လေ သလော၊ အမျက် အလွှမ်းမိုး ခံရလေ သလော'' ဟု ဆင်ခြင် ရမည်။ ငါ့သျှင်တို့ အကယ်၍ ရဟန်းသည် ဆင်ခြင်သော် ''ငါသည် အမျက် ထွက်တတ်၏၊ အမျက် အလွှမ်းမိုး ခံရ၏'' ဟု သိအံ့၊ ငါ့သျှင်တို့ ထိုရဟန်းသည် ထိုယုတ်ညံ့သော အကုသိုလ် တရားတို့ကိုပင် ပယ်ရန် အားထုတ် ရမည်။ ငါ့သျှင်တို့ အကယ်၍ ရဟန်းသည် ဆင်ခြင်သော် ''ငါသည် အမျက် မထွက်တတ်၊ အမျက် လွှမ်းမိုးမခံရ'' ဟု သိအံ့၊ ငါ့သျှင်တို့ ထိုရဟန်းသည် ကုသိုလ် တရားတို့၌ နေ့ရော ညဉ့်ပါ ကျင့်လျက် ထိုနှစ်သက် ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြင့် သာလျှင် နေရမည်။
ငါ့သျှင်တို့ တစ်ဖန် ထို့ပြင်လည်း ရဟန်းသည် ကိုယ်တိုင်ပင် မိမိကိုယ်ကို ''ငါသည် အမျက်ထွက်တတ်လေ သလော၊ အမျက်ထွက်ခြင်း အကြောင်းကြောင့် ရန်ငြိုးဖွဲ့တတ်လေ သလော'' ဟု ဆင်ခြင်ရမည် ငါ့သျှင်တို့ အကယ်၍ ရဟန်းသည် ဆင်ခြင်သော် ''ငါသည် အမျက်ထွက် တတ်၏၊ အမျက်ထွက်ခြင်း အကြောင်းကြောင့် ရန်ငြိုးဖွဲ့ တတ်၏'' ဟု သိအံ့၊ ငါ့သျှင်တို့ ထိုရဟန်းသည် ထိုယုတ်ညံ့သော အကုသိုလ် တရားတို့ကိုပင် ပယ်ရန် အားထုတ်ရမည်။ ငါ့သျှင်တို့ အကယ်၍ ရဟန်းသည် ဆင်ခြင်သော် ''ငါသည် အမျက် မထွက်တတ်၊ အမျက်ထွက်ခြင်း အကြောင်းကြောင့် ရန်ငြိုး မဖွဲ့တတ်'' ဟု သိအံ့၊ ငါ့သျှင်တို့ ထိုရဟန်းသည် ကုသိုလ် တရားတို့၌ နေ့ရော ညဉ့်ပါ ကျင့်လျက် ထိုနှစ်သက် ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြင့် သာလျှင် နေရမည်။
ငါ့သျှင်တို့ တစ်ဖန် ထို့ပြင်လည်း ရဟန်းသည် ကိုယ်တိုင်ပင် မိမိကိုယ်ကို ''ငါသည် အမျက်ထွက်တတ်လေ သလော၊ အမျက်ထွက်ခြင်း အကြောင်းကြောင့် အစွဲကြီးလေ သလော'' ဟု ဆင်ခြင်ရမည် ငါ့သျှင်တို့ အကယ်၍ ရဟန်းသည် ဆင်ခြင်သော် ''ငါသည် အမျက်ထွက် တတ်၏၊ အမျက်ထွက်ခြင်း အကြောင်းကြောင့် အစွဲကြီး၏'' ဟု သိအံ့၊ ငါ့သျှင်တို့ ထိုရဟန်းသည် ထိုယုတ်ညံ့သော အကုသိုလ် တရားတို့ကိုပင် ပယ်ရန် အားထုတ် ရမည်။ ငါ့သျှင်တို့ အကယ်၍ ရဟန်းသည် ဆင်ခြင်သော် ''ငါသည် အမျက် မထွက်တတ်၊ အမျက်ထွက်ခြင်း အကြောင်းကြောင့် အစွဲမကြီး'' ဟု သိအံ့၊ ငါ့သျှင်တို့ ထိုရဟန်းသည် ကုသိုလ် တရားတို့၌ နေ့ရော ညဉ့်ပါ ကျင့်လျက် ထိုနှစ်သက် ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြင့် သာလျှင် နေရမည်။
ငါ့သျှင်တို့ တစ်ဖန် ထို့ပြင်လည်း ရဟန်းသည် ကိုယ်တိုင်ပင် မိမိကိုယ်ကို ''ငါသည် အမျက်ထွက်တတ်လေ သလော၊ အမျက်နှင့် နီးစပ်သော စကားကို မြွက်ဆိုတတ်လေ သလော'' ဟု ဆင်ခြင်ရမည် ငါ့သျှင်တို့ အကယ်၍ ရဟန်းသည် ဆင်ခြင်သော် ''ငါသည် အမျက်ထွက် တတ်၏၊ အမျက်နှင့် နီးစပ်သော စကားကို မြွက်ဆိုတတ်၏'' ဟု သိအံ့၊ ငါ့သျှင်တို့ ထိုရဟန်းသည် ထိုယုတ်ညံ့သော အကုသိုလ် တရားတို့ကိုပင် ပယ်ရန် အားထုတ်ရမည်။ ငါ့သျှင်တို့ အကယ်၍ ရဟန်းသည် ဆင်ခြင်သော် ''ငါသည် အမျက် မထွက်တတ်၊ အမျက်နှင့် နီးစပ်သော စကားကို မမြွက်ဆိုတတ်'' ဟု သိအံ့၊ ငါ့သျှင်တို့ ထိုရဟန်းသည် ကုသိုလ် တရားတို့၌ နေ့ရော ညဉ့်ပါ ကျင့်လျက် ထိုနှစ်သက် ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြင့်သာလျှင် နေရမည်။
ငါ့သျှင်တို့ တစ်ဖန် ထို့ပြင်လည်း ရဟန်းသည် ကိုယ်တိုင်ပင် မိမိကိုယ်ကို ''ငါသည် စောဒကက စောဒနာသော် စောဒကကို ဆန့်ကျင်ဘက် ပြုလေ သလော'' ဟု ဆင်ခြင် ရမည်။ ငါ့သျှင်တို့ အကယ်၍ ရဟန်းသည် ဆင်ခြင်သော် ''ငါသည် စောဒကက စောဒနာသော် စောဒကကို ဆန့်ကျင်ဘက် ပြု၏'' ဟု သိအံ့၊ ငါ့သျှင်တို့ ထိုရဟန်းသည် ထိုယုတ်ညံ့သော အကုသိုလ် တရားတို့ကိုပင် ပယ်ရန် အားထုတ်ရမည် ငါ့သျှင်တို့ အကယ်၍ ရဟန်းသည် ဆင်ခြင်သော် ''ငါသည် စောဒကက စောဒနာသော် စောဒကကို ဆန့်ကျင်ဘက် မပြု'' ဟု သိအံ့၊ ငါ့သျှင်တို့ ထိုရဟန်းသည် ကုသိုလ် တရားတို့၌ နေ့ရော ညဉ့်ပါ ကျင့်လျက် ထိုနှစ်သက် ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြင့် သာလျှင် နေရမည်။
ငါ့သျှင်တို့ တစ်ဖန် ထို့ပြင်လည်း ရဟန်းသည် ကိုယ်တိုင်ပင် မိမိကိုယ်ကို ''ငါသည် စောဒကက စောဒနာသော် စောဒကကို ကြိမ်းမောင်းလေ သလော'' ဟု ဆင်ခြင် ရမည်။ ငါ့သျှင်တို့ အကယ်၍ ရဟန်းသည် ဆင်ခြင်သော် ''ငါသည် စောဒကက စောဒနာသော် စောဒကကို ကြိမ်းမောင်း၏'' ဟု သိအံ့၊ ငါ့သျှင်တို့ ထိုရဟန်းသည် ထိုယုတ်ညံ့သော အကုသိုလ် တရားတို့ကိုပင် ပယ်ရန် အားထုတ်ရမည်။ ငါ့သျှင်တို့ အကယ်၍ ရဟန်းသည် ဆင်ခြင်သော် ''ငါသည် စောဒကက စောဒနာသော် စောဒကကို မကြိမ်းမောင်း'' ဟု သိအံ့၊ ငါ့သျှင်တို့ ထိုရဟန်းသည် ကုသိုလ် တရားတို့၌ နေ့ရော ညဉ့်ပါ ကျင့်လျက် ထိုနှစ်သက် ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြင့် သာလျှင် နေရမည်။
ငါ့သျှင်တို့ တစ်ဖန် ထို့ပြင်လည်း ရဟန်းသည် ကိုယ်တိုင်ပင် မိမိကိုယ်ကို ''ငါသည် စောဒကက စောဒနာသော် စောဒကကို အပြစ် ပြန်တင်လေ သလော'' ဟု ဆင်ခြင် ရမည်။ ငါ့သျှင်တို့ အကယ်၍ ရဟန်းသည် ဆင်ခြင်သော် ''ငါသည် စောဒကက စောဒနာသော် စောဒကကို အပြစ် ပြန်တင်၏'' ဟု သိအံ့၊ ငါ့သျှင်တို့ ထိုရဟန်းသည် ယုတ်ညံ့သော ထိုအကုသိုလ် တရားတို့ကိုပင် ပယ်ရန် အားထုတ်ရမည် ငါ့သျှင်တို့ အကယ်၍ ရဟန်းသည် ဆင်ခြင်သော် ''ငါသည် စောဒကက စောဒနာသော် စောဒကကို အပြစ် ပြန်မတင်'' ဟု သိအံ့၊ ငါ့သျှင်တို့ ထိုရဟန်းသည် ကုသိုလ် တရားတို့၌ နေ့ရော ညဉ့်ပါ ကျင့်လျက် ထိုနှစ်သက် ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြင့် သာလျှင် နေရမည်။
ငါ့သျှင်တို့ တစ်ဖန် ထို့ပြင်လည်း ရဟန်းသည် ကိုယ်တိုင်ပင် မိမိကိုယ်ကို ''ငါသည် စောဒကက စောဒနာသော် စကား တစ်မျိုးဖြင့် စကား တစ်မျိုးကို ဖုံးလွှမ်းလေ သလော၊ စကားကို အပသို့ လွှဲဖယ်လေ သလော။ အမျက်ထွက်ခြင်း ပြစ်မှားခြင်း စိတ်ဆိုးခြင်းကို ထင်ရှားပြုလေ သလော'' ဟု ဆင်ခြင်ရမည် ငါ့သျှင်တို့ အကယ်၍ ရဟန်းသည် ဆင်ခြင်သော် ''ငါသည် စောဒကက စောဒနာသော် စကား တစ်မျိုးဖြင့် စကား တစ်မျိုးကို ဖုံးလွှမ်း၏၊ စကားကို အပသို့ လွှဲဖယ်၏၊ အမျက်ထွက်ခြင်း ပြစ်မှားခြင်း စိတ်ဆိုးခြင်းကို ထင်ရှား ပြု၏'' ဟု သိအံ့၊ ငါ့သျှင်တို့ ထိုရဟန်းသည် ထိုယုတ်ညံ့သော အကုသိုလ် တရားတို့ကိုပင် ပယ်ရန် အားထုတ်ရမည်။ ငါ့သျှင်တို့ အကယ်၍ ရဟန်းသည် ဆင်ခြင်သော် ''ငါသည် စောဒကက စောဒနာသော် စကားတစ်မျိုးဖြင့် စကားတစ်မျိုးကို မဖုံးလွှမ်း၊ စကားကို အပသို့ မလွှဲဖယ်၊ အမျက်ထွက်ခြင်း ပြစ်မှားခြင်း စိတ်ဆိုးခြင်းကို ထင်ရှား မပြု'' ဟု သိအံ့၊ ငါ့သျှင်တို့ ထိုရဟန်းသည် ကုသိုလ် တရားတို့၌ နေ့ရော ညဉ့်ပါ ကျင့်လျက် ထိုနှစ်သက် ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြင့် သာလျှင် နေရမည်။
ငါ့သျှင်တို့ တစ်ဖန် ထို့ပြင်လည်း ရဟန်းသည် ကိုယ်တိုင်ပင် မိမိကိုယ်ကို ''ငါသည် စောဒကက စောဒနာသော် မိမိ၏ဖြစ်စဉ် အတ္ထုပ္ပတ္တိကို ပြေလည်အောင် မဖြေဆိုနိုင်လေ သလော'' ဟု ဆင်ခြင်ရမည် ငါ့သျှင်တို့ အကယ်၍ ရဟန်းသည် ဆင်ခြင်သော် ''ငါသည် စောဒကက စောဒနာသော် မိမိ၏ ဖြစ်စဉ် အတ္ထုပ္ပတ္တိကို ပြေလည်အောင် မဖြေဆိုနိုင်'' ဟု သိအံ့၊ ငါ့သျှင်တို့ ထိုရဟန်းသည် ယုတ်ညံ့သော ထိုအကုသိုလ် တရားတို့ကိုပင် ပယ်ရန် အားထုတ် ရမည်။ ငါ့သျှင်တို့ အကယ်၍ ရဟန်းသည် ဆင်ခြင်သော် ''ငါသည် စောဒကက စောဒနာသော် မိမိ၏ ဖြစ်စဉ် အတ္ထုပ္ပတ္တိကို ပြေလည်အောင် ဖြေဆိုနိုင်၏'' ဟု သိအံ့၊ ငါ့သျှင်တို့ ထိုရဟန်းသည် ကုသိုလ် တရားတို့၌ နေ့ရော ညဉ့်ပါ ကျင့်လျက် ထိုနှစ်သက် ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြင့် သာလျှင် နေရမည်။
ငါ့သျှင်တို့ တစ်ဖန် ထို့ပြင်လည်း ရဟန်းသည် ကိုယ်တိုင်ပင် မိမိကိုယ်ကို ''ငါသည် ဂုဏ်ကျေးဇူးကို ချေဖျက်တတ်လေ သလော၊ ဂုဏ်ပြိုင်တတ်လေ သလော'' ဟု ဆင်ခြင်ရမည်။ ငါ့သျှင်တို့ အကယ်၍ ရဟန်းသည် ဆင်ခြင်သော် ''ငါသည် ဂုဏ်ကျေဇူးကို ချေဖျက် တတ်၏၊ ဂုဏ်ပြိုင် တတ်၏'' ဟု သိအံ့၊ ငါ့သျှင်တို့ ထိုရဟန်းသည် ထိုယုတ်ညံ့သော အကုသိုလ် တရားတို့ကိုပင် ပယ်ရန် အားထုတ်ရမည်။ ငါ့သျှင်တို့ အကယ်၍ ရဟန်းသည် ဆင်ခြင်သော် ''ငါသည် ဂုဏ်ကျေဇူးကို မချေဖျက်တတ်၊ ဂုဏ်မပြိုင်တတ်'' ဟု သိအံ့၊ ငါ့သျှင်တို့ ထိုရဟန်းသည် ကုသိုလ် တရားတို့၌ နေ့ရော ညဉ့်ပါ ကျင့်လျက် ထိုနှစ်သက် ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြင့် သာလျှင် နေရမည်။
ငါ့သျှင်တို့ တစ်ဖန် ထို့ပြင်လည်း ရဟန်းသည် ကိုယ်တိုင်ပင် မိမိကိုယ်ကို ''ငါသည် မနာလိုတတ်လေ သလော၊ ဝန်တို တတ်လေ သလော'' ဟု ဆင်ခြင် ရမည်။ ငါ့သျှင်တို့ အကယ်၍ ရဟန်းသည် ဆင်ခြင်သော် ''ငါသည် မနာလိုတတ်၊ ဝန်တို တတ်၏'' ဟု သိအံ့၊ ငါ့သျှင်တို့ ထိုရဟန်းသည် ထိုယုတ်ညံ့သော အကုသိုလ် တရားတို့ကိုပင် ပယ်ရန် အားထုတ် ရမည်။ ငါ့သျှင်တို့ အကယ်၍ ရဟန်းသည် ဆင်ခြင်သော် ''ငါသည် နာလို တတ်၏၊ ဝန်မတိုတတ်'' ဟု သိအံ့၊ ငါ့သျှင်တို့ ထိုရဟန်းသည် ကုသိုလ် တရားတို့၌ နေ့ရော ညဉ့်ပါ ကျင့်လျက် ထိုနှစ်သက် ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြင့် သာလျှင် နေရမည်။
ငါ့သျှင်တို့ တစ်ဖန် ထို့ပြင်လည်း ရဟန်းသည် ကိုယ်တိုင်ပင် မိမိကိုယ်ကို ''ငါသည် စဉ်းလဲတတ်လေ သလော၊ လှည့်ပတ် တတ်လေ သလော'' ဟု ဆင်ခြင် ရမည်။ ငါ့သျှင်တို့ အကယ်၍ ရဟန်းသည် ဆင်ခြင်သော် ''ငါသည် စဉ်းလဲ တတ်၏၊ လှည့်ပတ် တတ်၏'' ဟု သိအံ့၊ ငါ့သျှင်တို့ ထိုရဟန်းသည် ထိုယုတ်ညံ့သော အကုသိုလ် တရားတို့ကိုပင် ပယ်ရန် အားထုတ် ရမည်။ ငါ့သျှင်တို့ အကယ်၍ ရဟန်းသည် ဆင်ခြင်သော် ''ငါသည် မစဉ်းလဲတတ်၊ မလှည့်ပတ်တတ်'' ဟု သိအံ့၊ ငါ့သျှင်တို့ ထိုရဟန်းသည် ကုသိုလ် တရားတို့၌ နေ့ရော ညဉ့်ပါ ကျင့်လျက် ထိုနှစ်သက် ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြင့် သာလျှင် နေရမည်။
ငါ့သျှင်တို့ တစ်ဖန် ထို့ပြင်လည်း ရဟန်းသည် ကိုယ်တိုင်ပင် မိမိကိုယ်ကို ''ငါသည် ခက်ထန်လေသလော၊ အလွန် မောက်မာလေ သလော'' ဟု ဆင်ခြင် ရမည်။ ငါ့သျှင်တို့ အကယ်၍ ရဟန်းသည် ဆင်ခြင်သော် ''ငါသည် ခက်ထန်၏၊ အလွန် မောက်မာ၏'' ဟု သိအံ့၊ ငါ့သျှင်တို့ ထိုရဟန်းသည် ထိုယုတ်ညံ့သော အကုသိုလ် တရားတို့ကိုပင် ပယ်ရန် အားထုတ် ရမည်။ ငါ့သျှင်တို့ အကယ်၍ ရဟန်းသည် ဆင်ခြင်သော် ''ငါသည် မခက်ထန်၊ အလွန် မမောက်မာ'' ဟု သိအံ့၊ ငါ့သျှင်တို့ ထိုရဟန်းသည် ကုသိုလ် တရားတို့၌ နေ့ရော ညဉ့်ပါ ကျင့်လျက် ထိုနှစ်သက် ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြင့် သာလျှင် နေရမည်။
ငါ့သျှင်တို့ တစ်ဖန် ထို့ပြင်လည်း ရဟန်းသည် ကိုယ်တိုင်ပင် မိမိကိုယ်ကို ''ငါသည် မိမိ အယူကို စွဲလမ်း သလော၊ မြဲမြံစွာ ယူသလော၊ မစွန့်လွှတ်နိုင် သလော'' ဟု ဆင်ခြင် ရမည်။ ငါ့သျှင်တို့ အကယ်၍ ရဟန်းသည် ဆင်ခြင်သော် ''ငါသည် မိမိအယူကို စွဲလမ်း၏၊ မြဲမြံစွာ ယူ၏၊ မစွန့်လွှတ်နိုင်'' ဟု သိအံ့၊ ငါ့သျှင်တို့ ထိုရဟန်းသည် ထိုယုတ်ညံ့သော အကုသိုလ် တရားတို့ကိုပင် ပယ်ရန် အားထုတ်ရမည်။ ငါ့သျှင်တို့ အကယ်၍ ရဟန်းသည် ဆင်ခြင်သော် ''ငါသည် မိမိ အယူကို မစွဲလမ်း၊ မြဲမြံစွာ မယူ၊ စွန့်လွှတ်နိုင်၏'' ဟု သိအံ့၊ ငါ့သျှင်တို့ ထိုရဟန်းသည် ကုသိုလ် တရားတို့၌ နေ့ရော ညဉ့်ပါ ကျင့်လျက် ထိုနှစ်သက် ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြင့် သာလျှင် နေရမည်။
ငါ့သျှင်တို့ အကယ်၍ ရဟန်းသည် ဆင်ခြင်သော် မိမိ၌ ဤယုတ်ညံ့သော အကုသိုလ် တရား အားလုံးတို့ကိုပင် မပယ်ရ သေးသည်ကို ကောင်းစွာ တွေ့မြင်ငြားအံ့၊ ငါ့သျှင်တို့ ထိုရဟန်းသည် ဤယုတ်ညံ့သော အကုသိုလ် တရား အားလုံးတို့ကိုပင် ပယ်ရန် အားထုတ် ရမည်။ ငါ့သျှင်တို့ အကယ်၍ ရဟန်းသည် ဆင်ခြင်သော် မိမိ၌ ဤယုတ်ညံ့သော အကုသိုလ်တရား အားလုံးတို့ကိုပင် ပယ်ပြီးသည်ကို ကောင်းစွာ တွေ့မြင်ငြားအံ့၊ ငါ့သျှင်တို့ ထိုရဟန်းသည် ကုသိုလ် တရားတို့၌ နေ့ရော ညဉ့်ပါ ကျင့်လျက် ထိုနှစ်သက် ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြင့် သာလျှင် နေရမည်။
ငါ့သျှင်တို့ ဥပမာအားဖြင့် ငယ်ရွယ်နုပျို၍ အလှပြင်လေ့ ရှိသော မိန်းမပျိုသည်၊ သို့မဟုတ် ယောက်ျားပျိုသည် သန့်ရှင်း ဖြူစင်သော မှန် 'ကြေးမုံ' ၌ ဖြစ်စေ ကြည်လင်သော ရေခွက်၌ ဖြစ်စေ မိမိမျက်နှာရိပ်ကို ကြည့်ရှု လတ်သော် အကယ်၍ ထိုမျက်နှာ၌ မြူမှုန် အညစ်အကြေးတို့ကို တွေ့မြင်ငြားအံ့၊ ပယ်ရန် အားထုတ်၏။ အကယ်၍ ထိုမျက်နှာ၌ မြူမှုန် အညစ်အကြေးတို့ကို မတွေ့မြင် ငြားအံ့၊ ''ငါ့အား အရတော် ပေစွ၊ စင်ကြယ်ပေစွ'' ဟု ဝမ်းမြောက် ဝမ်းသာ ဖြစ်လေ၏။
ငါ့သျှင်တို့ ဤဥပမာအတူပင် အကယ်၍ ရဟန်းသည် ဆင်ခြင်သော် မိမိ၌ ဤယုတ်ညံ့သော အကုသိုလ် တရား အားလုံးတို့ကိုပင် မပယ်ရ သေးသည်ကို ကောင်းစွာ တွေ့မြင် ငြားအံ့၊ ငါ့သျှင်တို့ ထိုရဟန်း သည် ဤယုတ်ညံ့သော အကုသိုလ် တရား အားလုံးတို့ကိုပင် ပယ်ရန် အားထုတ်ရမည် ငါ့သျှင်တို့ အကယ်၍ ရဟန်းသည် ဆင်ခြင်သော် မိမိ၌ ဤယုတ်ညံ့သော အကုသိုလ်တရား အားလုံးတို့ကိုပင် ပယ်ပြီးသည်ကို ကောင်းစွာ တွေ့မြင် ငြားအံ့၊ ငါ့သျှင်တို့ ထိုရဟန်းသည် ကုသိုလ် တရားတို့၌ နေ့ရော ညဉ့်ပါ ကျင့်လျက် ထိုနှစ်သက် ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြင့် သာလျှင် နေရမည်။ 184
Posted by U Lawkanartha at 7/30/2011 05:13:00 PM0comments Links to this post
မိမိကိုယ်ကို ဤသို့ နှိုင်းယှဉ်ရမည်…
''အလိုဆိုး ရှိသော အလိုဆိုးတို့၏ အလိုသို့ လိုက်သော ပုဂ္ဂိုလ်ကို ငါ မချစ် မနှစ်သက်၊ ငါလည်း အလိုဆိုး ရှိငြားအံ့၊ အလိုဆိုးတို့၏ အလိုသို့ လိုက်ငြားအံ့၊ ငါ့ကိုလည်း သူတစ်ပါးတို့ ချစ်နှစ်သက်မည်မဟုတ်'' ဟု နှိုင်းယှဉ် ရမည်။ ငါ့သျှင်တို့ ဤသို့ သိသော ရဟန်းသည် ''ငါသည် အလိုဆိုး ရှိသူ မဖြစ်အံ့၊ အလိုဆိုးတို့၏ အလိုသို့ လိုက်သူ မဖြစ်အံ့'' ဟု စိတ်ကို ဖြစ်စေရမည်။
''မိမိကိုယ်ကို မြှင့်တင် တတ်သော သူတစ်ပါးကို ရှုတ်ချ တတ်သော ပုဂ္ဂိုလ်ကို ငါ မချစ် မနှစ်သက်၊ ငါလည်း မိမိကိုယ်ကို မြှင့်တင်ငြားအံ့၊ သူတစ်ပါးကို ရှုတ်ချ ငြားအံ့၊ ငါ့ကိုလည်း သူတစ်ပါးတို့ ချစ်နှစ်သက်မည် မဟုတ်'' ဟု နှိုင်းယှဉ် ရမည်။ ငါ့သျှင်တို့ ဤသို့ သိသော ရဟန်းသည် ''ငါသည် မိမိကိုယ်ကို မြှင့်တင် တတ်သူ မဖြစ်အံ့၊ သူတစ်ပါးကို ရှုတ်ချ တတ်သူ မဖြစ်အံ့'' ဟု စိတ်ကို ဖြစ်စေရမည်။
''အမျက် ထွက်တတ်သော အမျက် အလွှမ်းမိုးခံရသော ပုဂ္ဂိုလ်ကို ငါ မချစ် မနှစ်သက်၊ ငါလည်း အမျက်ထွက် ငြားအံ့၊ အမျက် အလွှမ်းမိုး ခံရငြားအံ့၊ ငါ့ကိုလည်း သူတစ်ပါးတို့ ချစ်နှစ်သက်မည် မဟုတ်'' ဟု နှိုင်းယှဉ် ရမည်။ ငါ့သျှင်တို့ ဤသို့ သိသော ရဟန်းသည် ''ငါသည် အမျက်ထွက်သူ မဖြစ်အံ့၊ အမျက် အလွှမ်းမိုး ခံရသူ မဖြစ်အံ့'' ဟု စိတ်ကို ဖြစ်စေရမည်။
''အမျက် ထွက်တတ်သော အမျက် ထွက်ခြင်း အကြောင်းကြောင့် ရန်ငြိုး ဖွဲ့တတ်သော ပုဂ္ဂိုလ်ကို ငါမချစ် မနှစ်သက်၊ ငါလည်း အမျက်ထွက် ငြားအံ့၊ အမျက်ထွက်ခြင်း အကြောင်းကြောင့် ရန်ငြိုးဖွဲ့ငြားအံ့၊ ငါ့ကိုလည်း သူတစ်ပါးတို့ ချစ်နှစ်သက်မည် မဟုတ်'' ဟု နှိုင်းယှဉ် ရမည်။ ငါ့သျှင်တို့ ဤသို့ သိသော ရဟန်းသည် ''ငါသည် အမျက် ထွက်သူ မဖြစ်အံ့၊ အမျက် ထွက်ခြင်း အကြောင်းကြောင့် ရန်ငြိုးဖွဲသူ မဖြစ်အံ့'' ဟု စိတ်ကို ဖြစ်စေရမည်။
''အမျက် ထွက်တတ်သော အမျက် ထွက်ခြင်း အကြောင်းကြောင့် အစွဲကြီးသော ပုဂ္ဂိုလ်ကို ငါမချစ် မနှစ်သက်၊ ငါလည်း အမျက်ထွက် ငြားအံ့၊ အမျက်ထွက်ခြင်း အကြောင်းကြောင့် အစွဲကြီး ငြားအံ့၊ ငါ့ကိုလည်း သူတစ်ပါးတို့ ချစ်နှစ်သက်မည် မဟုတ်'' ဟု နှိုင်းယှဉ် ရမည်။ ငါ့သျှင်တို့ ဤသို့ သိသော ရဟန်းသည် ''ငါသည် အမျက်ထွက်သူ မဖြစ်အံ့၊ အမျက်ထွက်ခြင်း အကြောင်းကြောင့် အစွဲကြီးသူ မဖြစ်အံ့'' ဟု ဤသို့ စိတ်ကို ဖြစ်စေရမည်။
''အမျက် ထွက်တတ်သော အမျက်နှင့် နီးစပ်သော စကားကို မြွက်ဆိုတတ်သော ပုဂ္ဂိုလ်ကို ငါမချစ် မနှစ်သက်၊ ငါလည်း အမျက်ထွက် ငြားအံ့၊ အမျက်နှင့် နီးစပ်သော စကားကို မြွက်ဆိုငြားအံ့၊ ငါ့ကိုလည်း သူတစ်ပါးတို့ ချစ်နှစ်သက်မည် မဟုတ်'' ဟု နှိုင်းယှဉ် ရမည်။ ငါ့သျှင်တို့ ဤသို့ သိသော ရဟန်းသည် ''ငါသည် အမျက် ထွက်သူ မဖြစ်အံ့၊ အမျက်နှင့် နီးစပ်သော စကားကို မမြွက်ဆိုအံ့'' ဟု ဤသို့ စိတ်ကို ဖြစ်စေရမည်။
''စောဒကက စောဒနာသော် စောဒကကို ဆန့်ကျင်ဘက် ပြုသော ပုဂ္ဂိုလ်ကို ငါမချစ် မနှစ်သက်၊ ငါလည်း စောဒကက စောဒနာသော် စောဒကကို ဆန့်ကျင်ဘက် ပြုငြားအံ့၊ ငါ့ကိုလည်း သူတစ်ပါးတို့ ချစ်နှစ်သက်မည် မဟုတ်'' ဟု နှိုင်းယှဉ် ရမည်။ ငါ့သျှင်တို့ ဤသို့ သိသော ရဟန်းသည် ''ငါသည် စောဒကက စောဒနာသော် စောဒကကို ဆန့်ကျင်ဘက် မပြုအံ့'' ဟု စိတ်ကို ဖြစ်စေရမည်။
''စောဒကက စောဒနာသော် စောဒကကို ကြိမ်းမောင်းသော ပုဂ္ဂိုလ်ကို ငါမချစ် မနှစ်သက်၊ ငါလည်း စောဒကက စောဒနာသော် စောဒကကို ကြိမ်းမောင်းအံ့၊ ငါ့ကိုလည်း သူတစ်ပါးတို့ ချစ်နှစ်သက်မည် မဟုတ်'' ဟု နှိုင်းယှဉ် ရမည်။ ငါ့သျှင်တို့ ဤသို့ သိသော ရဟန်းသည် ''ငါသည် စောဒကက စောဒနာသော် စောဒကကို မကြိမ်းမောင်းအံ့'' ဟု ဤသို့ စိတ်ကို ဖြစ်စေရမည်။
''စောဒကက စောဒနာသော် စောဒကကို အပြစ် ပြန်တင်သော ပုဂ္ဂိုလ်ကို ငါ မချစ် မနှစ်သက်၊ ငါလည်း စောဒကက စောဒနာသော် စောဒကကို အပြစ် ပြန်တင်ငြားအံ့၊ ငါ့ကိုလည်း သူတစ်ပါးတို့ ချစ်နှစ်သက်မည် မဟုတ်'' ဟု နှိုင်းယှဉ် ရမည်။ ငါ့သျှင်တို့ ဤသို့ သိသော ရဟန်းသည် ''ငါသည် စောဒကက စောဒနာသော် စောဒကကို အပြစ် ပြန်မတင်အံ့'' ဟု စိတ်ကို ဖြစ်စေရမည်။
''စောဒကက စောဒနာသော် စကား တစ်မျိုးဖြင့် စကား တစ်မျိုးကို ဖုံးလွှမ်းတတ်သော၊ စကားကို အပသို့ လွှဲဖယ်သော၊ အမျက် ထွက်ခြင်း ပြစ်မှားခြင်း စိတ်ဆိုးခြင်းကို ထင်ရှား ပြုတတ်သော ဤပုဂ္ဂိုလ်ကို ငါမချစ် မနှစ်သက်၊ ငါလည်း စောဒကက စောဒနာသော် စကား တစ်မျိုးဖြင့် စကား တစ်မျိုးကို ဖုံးလွှမ်း ငြားအံ့၊ စကားကို အပသို့ လွှဲဖယ် ငြားအံ့၊ အမျက် ထွက်ခြင်း ပြစ်မှားခြင်း စိတ်ဆိုးခြင်းကို ထင်ရှား ပြုငြားအံ့၊ ငါ့ကိုလည်း သူတစ်ပါးတို့ ချစ်နှစ်သက်မည် မဟုတ်'' ဟု နှိုင်းယှဉ် ရမည်။ ငါ့သျှင်တို့ ဤသို့ သိသော ရဟန်းသည် ''ငါသည် စောဒကက စောဒနာသော် စကား တစ်မျိုးဖြင့် စကား တစ်မျိုးကို မဖုံးလွှမ်းအံ့၊ စကားကို အပသို့ မလွှဲဖယ်အံ့၊ အမျက် ထွက်ခြင်း ပြစ်မှားခြင်း စိတ်ဆိုးခြင်းကို ထင်ရှား မပြုအံ့'' ဟု စိတ်ကို ဖြစ်စေရမည်။
''စောဒကက စောဒနာသော် မိမိ၏ ဖြစ်စဉ် အတ္ထုပ္ပတ္တိကို ပြေလည်အောင် မဖြေဆိုနိုင်သော ပုဂ္ဂိုလ်ကို ငါမချစ် မနှစ်သက်၊ ငါလည်း စောဒကက စောဒနာသော် မိမိ၏ ဖြစ်စဉ် အတ္ထုပ္ပတ္တိတို့ကို ပြေလည်အောင် မဖြေဆို နိုင်ငြားအံ့၊ ငါ့ကိုလည်း သူတစ်ပါးတို့ ချစ်နှစ်သက်မည် မဟုတ်'' ဟု နှိုင်းယှဉ် ရမည်။ ငါ့သျှင်တို့ ဤသို့ သိသော ရဟန်းသည် ''ငါသည် စောဒကက စောဒနာသော် မိမိ၏ ဖြစ်စဉ် အတ္ထုပ္ပတ္တိကို ပြေလည်အောင် ဖြေဆိုအံ့'' ဟု စိတ်ကို ဖြစ်စေရမည်။
''ဂုဏ်ကျေးဇူးကို ချေဖျက် တတ်သော ဂုဏ်ပြိုင် တတ်သော ပုဂ္ဂိုလ်ကို ငါ မချစ် မနှစ်သက်၊ ငါလည်း ဂုဏ်ကျေးဇူးကို ချေဖျက် ငြားအံ့၊ ဂုဏ်ပြိုင် ငြားအံ့၊ ငါ့ကိုလည်း သူတစ်ပါးတို့ ချစ်နှစ်သက်မည် မဟုတ်'' ဟု နှိုင်းယှဉ် ရမည်။ ငါ့သျှင်တို့ ဤသို့ သိသော ရဟန်းသည် ''ငါသည် ဂုဏ်ကျေးဇူးကို ချေဖျက်သူ မဖြစ်အံ့၊ ဂုဏ်ပြိုင်သူ မဖြစ်အံ့'' ဟု စိတ်ကို ဖြစ်စေရမည်။
''မနာလို တတ်သော ဝန်တို တတ်သော ပုဂ္ဂိုလ်ကို ငါ မချစ် မနှစ်သက်၊ ငါလည်း မနာလို ငြားအံ့၊ ဝန်တို ငြားအံ့၊ ငါ့ကိုလည်း သူတစ်ပါးတို့ ချစ်နှစ်သက်မည် မဟုတ်'' ဟု နှိုင်းယှဉ် ရမည်။ ငါ့သျှင်တို့ ဤသို့ သိသော ရဟန်းသည် ''ငါသည် နာလိုသူ ဖြစ်အံ့၊ ဝန်မတိုသူ ဖြစ်အံ့'' ဟု စိတ်ကို ဖြစ်စေရမည်။
''စဉ်းလဲ တတ်သော လှည့်ပတ် တတ်သော ပုဂ္ဂိုလ်ကို ငါမချစ် မနှစ်သက်၊ ငါလည်း စဉ်းလဲငြားအံ့၊ လှည့်ပတ် ငြားအံ့၊ ငါ့ကိုလည်း သူတစ်ပါးတို့ ချစ်နှစ်သက်မည် မဟုတ်'' ဟု နှိုင်းယှဉ် ရမည်။ ငါ့သျှင်တို့ ဤသို့ သိသော ရဟန်းသည် ''ငါသည် မစဉ်းလဲသူ ဖြစ်အံ့၊ မလှည့်ပတ်သူ ဖြစ်အံ့'' ဟု စိတ်ကို ဖြစ်စေရမည်။
''ခက်ထန်သော အလွန် မောက်မာသော ပုဂ္ဂိုလ်ကို ငါ မချစ် မနှစ်သက်၊ ငါလည်း ခက်ထန် ငြားအံ့၊ အလွန် မောက်မာ ငြားအံ့၊ ငါ့ကိုလည်း သူတစ်ပါးတို့ ချစ်နှစ်သက်မည် မဟုတ်'' ဟု နှိုင်းယှဉ် ရမည်။ ငါ့သျှင်တို့ ဤသို့ သိသော ရဟန်းသည် ''ငါသည် မခက်ထန်သူ ဖြစ်အံ့၊ အလွန် မမောက်မာသူ ဖြစ်အံ့'' ဟု စိတ်ကို ဖြစ်စေရမည်။
''မိမိအယူကို စွဲလမ်းတတ်သော မြဲမြံစွာ ယူတတ်သော မစွန့်လွှတ် နိုင်သော ပုဂ္ဂိုလ်ကို ငါ မချစ် မနှစ်သက်၊ ငါလည်း မိမိအယူကို စွဲလမ်း ငြားအံ့၊ မြဲမြံစွာ ယူငြားအံ့၊ မစွန့်လွှတ် နိုင်ငြားအံ့၊ ငါ့ကိုလည်း သူတစ်ပါးတို့ ချစ်နှစ်သက်မည် မဟုတ်'' ဟု နှိုင်းယှဉ် ရမည်။ ငါ့သျှင်တို့ ဤသို့ သိသော ရဟန်းသည် ''ငါသည် မိမိအယူကို မစွဲလမ်းသူ မြဲမြံစွာ မယူသူ စွန့်လွှတ်နိုင်သူ ဖြစ်အံ့'' ဟု စိတ်ကို ဖြစ်စေရမည်။ 183
Posted by U Lawkanartha at 7/29/2011 02:34:00 PM 1 comments Links to this post
Posted by U Lawkanartha at 7/28/2011 05:39:00 PM0comments Links to this post
အဆင်း-အသံ-ခေါင်းပါးမှု-သီလ တစ်မျိုးစီကို ကြည်ညိုတတ်သူလေးမျိုး...
ရဟန်းတို့ လောက၌ ဤပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးတို့သည် ထင်ရှားရှိကုန်၏။
အဆင်းသဏ္ဌာန်ကို ပမာဏပြု၍ အဆင်းသဏ္ဌာန်၌ ကြည်ညိုသော ပုဂ္ဂိုလ်၊
အသံကို ပမာဏပြု၍ အသံ၌ ကြည်ညိုသော ပုဂ္ဂိုလ်၊
ခေါင်းပါးမှုကို ပမာဏပြု၍ ခေါင်းပါးမှု၌ ကြည်ညိုသော ပုဂ္ဂိုလ်၊
သီလဂုဏ် သမာဓိ ဂုဏ်စသော တရားကို ပမာဏပြု၍တရား၌ ကြည်ညိုသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့တည်း။
ရဟန်းတို့ လောက၌ ဤပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးတို့သည် ထင်ရှားရှိကုန်၏ ဟု မိန့်တော်မူ၏။
အကြင်သူတို့သည် အဆင်းသဏ္ဌာန်၌ ပမာဏပြုကုန်၏၊ အကြင်သူတို့သည်ကား အသံသို့ အစဉ်လိုက် ကုန်၏၊ ထိုသူတို့သည် အလို 'ဆန္ဒ'၏ လည်းကောင်း၊ တပ်မက်ခြင်း 'ရာဂ'၏ လည်းကောင်း အလိုသို့ လိုက်ပါကုန်သည်ဖြစ်၍ ဂုဏ် ကျေးဇူးကို မသိနိုင်ကြကုန်။
ထက်ဝန်းကျင်မှ ပိတ်ပင်ခံရသော သူမိုက်သည်
ဘုရားစသည်တို့၏ အဇ္ဈတ္တ သန္တာန်၌ ရှိသော ဂုဏ်ကိုလည်း မသိ၊
ဗဟိဒ္ဓသန္တာန်၌ ဖြစ်သော ဂုဏ်ကိုလည်း မမြင်၊
ထိုသူသည် စင်စစ် ချီးမွမ်းသံဖြင့် မျောရလေတော့၏။
အကြင်သူသည် ဘုရားစသည်တို့၏ အဇ္ဈတ္တသန္တာန်၌ ရှိသော ဂုဏ်ကို မသိ၊
ဗဟိဒ္ဓသန္တာန်၌ ဖြစ်သော ဂုဏ်ကိုသာ ရှုမြင်၏၊
အပသန္တာန်၌ အကျိုးကို ရှုလေ့ရှိ၏၊
ထို ပုဂ္ဂိုလ်သည်လည်း ချီးမွမ်းသံဖြင့် မျောရလေ၏။
အကြင်သူသည် ဘုရားစသည်တို့၏ အဇ္ဈတ္တသန္တာန်၌ ဖြစ်သော ဂုဏ်ကိုလည်း သိ၏၊
ဗဟိဒ္ဓ သန္တာန်၌ ဖြစ်သော ဂုဏ်ကိုလည်း ရှုမြင်၏၊
အပိတ်အပင် ကင်းရာ နိဗ္ဗာန်ကို ရှုလေ့ရှိ၏၊
ထိုသူသည်ကား အသံဖြင့် မမျောနိုင်တော့ချေ။ 65
၅ - ရူပသုတ်၊ (၇) ၂- ပတ္တကမ္မဝဂ်၊ စတုက္ကနိပါတ်၊ အဂုင်္တ္တိုရ်ပါဠိတော်။
Posted by U Lawkanartha at 7/27/2011 06:42:00 PM0comments Links to this post
ရဟန်းတို့ အမြတ်ဆုံးတို့၌ ကြည်ညိုခြင်းတို့သည် ဤလေးမျိုးတို့တည်း၊
၃… တဏှာကုန်ရာ မြတ်နိဗ္ဗာန်
Posted by U Lawkanartha at 7/21/2011 09:51:00 AM0comments Links to this post
မေ့လျော့မှု 'ပမာဒ'ကို ပယ်ရန်...
ပြစ်မှားမှု 'ဒေါသ' ကို။
တွေဝေမှု 'မောဟ' ကို။
အမျက်ထွက်မှု 'ကောဓ' ကို။
ရန်ငြိုးဖွဲ့မှု 'ဥပနာဟ' ကို။
ကျေးဇူးကို ချေဖျက်မှု 'မက္ခ' ကို။
အပြိုင်ပြုမှု 'ပဠာသ' ကို။
ငြူစူမှု 'ဣဿာ' ကို။
ဝန်တိုမှု 'မစ္ဆရိယ' ကို။
လှည့်ပတ်မှု 'မာယာ' ကို။
စဉ်းလဲမှု 'သာဌေယျ' ကို။
ခက်ထန်မှု 'ထမ္ဘ' ကို။
ခြုတ်ခြယ်မှု 'သာရမ္ဘ' ကို။
ထောင်လွှားမှု 'မာန' ကို။
အလွန်ထောင်လွှားမှု 'အတိမာန' ကို။
ယစ်မူးမှု 'မဒ' ကို။
ထူးသောဉာဏ်ဖြင့် သိရန်။ ပိုင်းခြား၍သိရန်။ ထက်ဝန်းကျင် ကုန်ရန်။ ပယ်ရန်။ ကုန်ခန်းရန်။ ပျက်စီးရန်။ ကင်းရန်။ ချုပ်ရန်။ စွန့်ရန်။ တစ်ဖန်စွန့်ရန်။
ဤတရား တစ်မျိုးကို ပွါးများအပ်ကုန်၏။
ဤတရား နှစ်မျိုးတို့ကို ပွါးများ အပ်ကုန်၏။
ဤတရား သုံးမျိုးတို့ကို ပွါးများ အပ်ကုန်၏။
ဤတရား လေးမျိုးတို့ကို ပွါးများအပ်ကုန်၏။
ဤတရား ငါးမျိုးတို့ကို ပွါးများအပ်ကုန်၏။
ဤတရား ခြောက်မျိုးတို့ကို ပွါးများအပ်ကုန်၏။
ဤတရား ခုနစ်မျိုးတို့ကို ပွါးများအပ်ကုန်၏။
ဤတရား ရှစ်မျိုးတို့ကို ပွါးများအပ်ကုန်၏။
ဤတရား ကိုးမျိုးတို့ကို ပွါးများအပ်ကုန်၏။
ဤတရား ဆယ်မျိုးတို့ကို ပွါးများအပ်ကုန်၏။
ဤတရား တစ်ဆယ့်တစ်မျိုးတို့ကို ပွါးများအပ်ကုန်၏။
ရာဂပေယျာလ၊ အင်္ဂုတ္တိုရ် ၁-၁၁။
Posted by U Lawkanartha at 7/12/2011 06:18:00 PM0comments Links to this post
Posted by U Lawkanartha at 7/07/2011 06:40:00 PM 1 comments Links to this post
သန့်တည်ပွား ဦးမြင့်လွင်_ လူနှင့် ၂၂၇-သွယ်... (မစိုးရိမ်စာသင်သား)
လူနှင့် ၂၂၇-သွယ်... (မစိုးရိမ်စာသင်သား)
Last changed by အမေ့သား လေး နေဇော်ထွေး ...... on 11/08/2011
ရှာဖွေစုဆောင်း....ဟက်ကင်း ပညာ ....
Links များကို mouse နဲ့ ထောက်လိုက်ရင် လင်းလင်းလက်လက် အရောင်လေးတွေ ရရှိပါလိမ့်မယ်...
soft ware လေးများ
window7မှာ အခုလိုမျိုး program တွေကို install လုပ်မရရင်
alphazawgyi restart မလိုဘူးနော်
Computerသင်တန်းတက်ပြီးတာနဲ့ Hardwareသမားတစ်ယောက် ဖြစ်မလာပါ
CPR ၏ အခြေခံ (၂)
emsisoft anti -malware5.1
folder လေးကို ...အရောင်ပြောင်းမယ်
for photo and forums
funny face လုပ်မယ်
g mail အကြောင်း
Galk မှာ ကိုယ့်ကို ဘယ်သူတွေ block လုပ်ထားသလဲ... စမ်းသပ်နည်း.
Gmail စတိုင်အသစ်တဲ့ဗျာ Firefox add-0ns
Gmail နဲ့ Gtalkအကောင့် lock ကျနေပါက
Gmail ပင့် color ဒီဇိုင်းလေးလေ
Google Talk ကို ပွားပြီးသုံးမယ်..... :)
Hacker တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ အတွက်
hard disc မှာနေရာမျာများရအောင်
kestrel GX ဆော့်-၀ဲလ်
Mouse ကို နှစ်ချက်မျှနှိပ်ရုံဖြင့် XPကို သော့ခတ်ပစ်လိုက်မယ်
mouse မရှိရင် ဘာလုပ်မလည်း
mp3 ပေါ်မှာ စာလေးဘာလေးနဲ့ထည့်ရင်မကောင်းဘူးလား
network card အခက်အခဲဖြစ်နေသူများအတွက် Realtek Ethernet Drivers v7.043.0421 - 2012
Network ချိတ်ဆက်နည်း (မြန်မာလို)
password ရဲ့ ကာကွယ်မှုစွမ်းအားကိုစစ်ဖို့
pfingo rate( မြန်မာငွေဖြင့်)
phone call ကနေဒါ အမေရိကန် ဖရီးခေါ
photoshop cs tools
Portable ဆော့ဖ်ဝဲကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်
team viewer အကြောင်းသိကောင်းစရာ
team viewer လေ့ကျင့်ကြရအောင်
test file ကို notepad ထဲထည့်ပြီး audio နားထောင်မယ်
Total video converter လေး ကို လိုချင်သူများ ...
USB Memory Stick ထဲကဖိုင်တွေကို ဖျက်မရ..ကော်ပီလုပ်မရတော့ဘူးလား။(ဖြေရှင်းနည်းလေးပါ)
video edit ဆော့်ဝဲလေးများ ..
wifi password ခိုးနည်း
wifi password ဟက်နည်း
window7တင်ချင်သူများအတွက် အ၇မ်းများပါတယ်
window7အကြောင်း
Window Media Player အကြောင်းတစ်စေ့ တစ်စောင်း _
ကရကုဋ်ရာသီဖွားအတွက် ဆရာကြီး စံ-ဇာဏီဘို၏
ကို ဟက်ကာများ ....ဟက်ကာ ဟက် ကာ
ကွန်နက်ရှင် အရမ်းနှေးနေလို့ ဂျီတော့ ၀င်မရဘူးလား စမ်းလိုက်ပါ
ကွန်ပျူတာ အခြေခံ အပိုင်း (၇)
ကွန်ပျူတာကိုမိမိကြိုက်တဲ့အချိန်မှာ Auto Shutdown လုပ်ခိုင်ရအောင်
ကွန်ပျူတာတစ်လုံးတွင်ရှိသင့်သော soft ware လေးများ
ကွန်ပျူတာအသုံးပြုတာကြာလာတာနဲ့ အမျှပြန့် ကျဲလာတဲ့ဖိုင်တွေကို ပြန်စီပေးတဲ့ဆော့လ်ဝဲလ်လေးပါ
ကွန်ပျူတာအခြေခံ အပိုင်း (၂)
ကွန်ပျူတာအခြေခံ အပိုင်း (၁)
ကွန်ပျူတာအခြေခံ အပိုင်း (၃)
ကွန်ပျူတာအခြေခံ အပိုင်း (၄)
ကွန်ပျူတာအခြေခံ အပိုင်း (၅)
ကွန်ပျူတာအခြေခံ အပိုင်း (၆)
ကွန်ပျူတာအခြေခံ အပိုင်း (၈)
ချစ်သော စာဖတ်သူများ အလွယ်တကူ flight ဈေးနှုန်းများကို သိရှိစေဖို့ ......
ဂျီမေး အသူံးပြုနည်း လျှို့ဝှက်ချက်
ဂျီမေး အကြောင်း ....
ဂျီမေး ပေါ်မှ ဘာသာပြန် language
ဂျီးမေးအကောက်အသစ် ကို ဒီလိုဖွင့်ရင် လွယ်လွယ်လေးပါ
ငလျင်အပျက်အစီးပုံ အောက်မှ ဒေါ်လာ ၇၅ သန်းဖိုး ငွေများကို ရိုးသားစွာ ပြန်အပ်ကြသော ဂျပန်လူမျို
စီပီအာ ၏ အခြေခံ(၁)
စီးပွားဖြစ်လာတဲ့ ဟက်ကင်း လုပ်ငန်း
ဆရာတော်ဥုးသုမင်္ဂလ (ဒယ်အိုးဆရာတော် ) ကွမ် ယင်ဆိုသည်မှာ
ဆရာကြီး ဥိးဂိုအင်ဂါ၏ ....
တွံတေးစိုးအောင် – ကျွန်တော်တင်တဲ့ရွေမင်းသမီး
ဒီဃနီကာယ် ပိဋကတ်သုံးပုံ ပါဠိတော် မြန်မာပြန် MP3 တရားတော်
ဓမ္န ထေရ၀ါဒနှင့် မဟာယန
ဓမ္မ၀က် ဆိုက်ဒ်များ ...
နားမလည်မှုတွေနဲ့ ဦးဇင်းဆီကို လာလည်သွားတဲ့ ရွှေဓူဝံသို့..
နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တွေ့ဆုံ
ပရဟိတ ဆော်ရွက်နေသူများသိူ့ ...
ပိဋကက် (၃) ပုံ နှင့် စာအုပ်များ တရားတော်များ
ဖုန်းအတွက် အထူးထုတ်ထားတဲ့ Modiac Video Converter 2.5
ဗုဒွဘာသာ အမျိုးသမီးတို့အတွက် .....
ဘလော့မှာ X mas ထည့်မယ်
မချိုးမချန်ကြည့်သွား ရန် .....စံ-ဇာဏီဘို..
မိဿရာသီဖွားအတွက် ဆရာကြီး စံ-ဇာဏီဘို၏
မွန်အမျိုးသားတို့၏ နောက်ခံသမိုင်း အခန်း
မွန်ပြည်နယ် သတင်း ဇန်နဝါရီ-၂၀၁၁
မှတ်သားစရာ သာသနာ့ ရေးရာ.....
ယာယီ အပစ်ရပ်ပြီး ဆွေးနွေးရန် ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ တောင်းဆို
ရှမ်းပြည် နှင့် ရှမ်း လူမျိုးများ အကြောင်း
ရှိသင့်တဲ့ soft ware လေးများ
သိဟ်ရာသီဖွားအတွက် ဆရာကြီး စံ-ဇာဏီဘို၏
သီချင်းလေး ပါ နည်းနည်းကြည့်လိုက်နော်
သုမင်္ဂလဖောင်ဒေးရှင်း ထူထောင်ရန် (တတိယ) အကြိမ် အကြို ညှိနိုင်းဆွေးနွေးပွဲနှင့် စုံနံ့သာမြိုင
အင်တာနက် security စာအုပ်
အင်တာနက်သုံး ၀ဘ်ဆိုက်လိပ်စာများစုစည်းထားသည့် စာအုပ်
အီးမေးအတုနဲ့ ၀င် ရန်တိုက်မယ်
အွန်လိုင်းမှ အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားနိုင်သော အကောင်းဆုံးဝက်ဆိုဒ်ဆယ်ခု
ကောသလမင်းကြီး အိပ်မက် ၁၆ချက်
ဒေါညေးခူကျေးရွှာသို့ .. ဘွဲနှင်းသဘင်
ဖေ့ဘုတ် အကောက် ဖျက်ရန်
ဖေ့ဘုတ်ကနေ mp3 တင်ကြမယ်
မေထုန်ရာသီဖွားအတွက် ဆရာကြီး စံ-ဇာဏီဘို၏
မြန်မာ နိုင်ငံမှာ GSMဖုန်းတွေကို Nokia handset
မြန့်မာ့ကြက်ခြေနီ အသင်းကြီး၏ မျောမှန်းချက်နှင့်ရည်ရွယ်ချက်...
ွဂျီးတော့ font error ကိုဒီမှာကြည့်
၀င်လာသမျှ မေးလ်တွေကို ကိုယ့်ရဲ့ အကောင့်ထဲရော ထပ်တူ ၀င်အောင် လုပ်နည်းလေးပါ
၀င်းဒို7ပေါ်မှာ မြန်မာလို ဖိုင်နိမ်း ပေးမယ်
၀င်းဒိုး7ကို ၀င်းဒိုး 8ပုံစံ သုံးချင်သူများအတွက်
၂၀၁၁ အတွက် အခမဲ့ အသုံးပြုနိုင်မည့် ထိပ်တန်း Antivirus ၅ မျိုး
ကြက်ခြေနီဖခင် ဟင်နရီဒူးနန့် ၏ ပျောက်ဆုံးနေသော ...နေ့ရက် များ..မှ ....
ပြိဿရာသီဖွားအတွက် ဆရာကြီး စံ-ဇာဏီဘို၏
နိုင်ငံတကာ ကို ဖုန်း အလကားပြောလို့ရမယ့် TUITALK
ရုပ်ပွားဆင်းတု ထားရှိခြင်း၊ ကိုးကွယ်ခြင်း
♥ ♥ ♥ စာအုပ်စာပေများရှာရန် လမ်းညွှန် ♥ ♥ ♥
မွန်အမျိုးသားတို့၏ နောက်ခ့သမိုင်း (2)